शिक्षा सामाजिक सेवा हुनु पर्दछ : गोविन्द कार्की - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख १०, २०७५ समय: २२:११:५३
गोविन्द कार्कीको जन्म माता गंगामाया र पिता छत्रबहादुर कार्कीबाट वि.स. २०२४ मा झापाको गौरादहमा भएको हो । २०५० सालमा तुलसा दाहालसँग विवाहबन्धनमा बाँधिनु भएका कार्की विगत २५ वर्ष देखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय रहदै आउनु भएको छ । विभिन्न संघसंस्थाहरुमा समेत क्रियाशिल रहनु भएका कार्की आफु शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले समाजमा शिक्षाको ज्योति पैmल्याउने काममा लागि रहने बताउनु हुन्छ ।
एम.ए. बि.एड सम्मको अध्ययन गर्नुभएका कार्की सुन्दरहरैँचा स्थित विराटचोक मोरङमा स्थायी बसोबास गर्दै आउनु भएको छ । शिक्षा र समाजसेवामा विशेष चासो राख्ने कार्की अबको शिक्षा व्यवहारिक, प्रयोगात्मक र समयसापेक्ष हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उत्कृष्ट विद्यालयमा परिचित सुविजीमुर मेमोरियल मा.वि. विराटचोकका शिक्षासेवी तथा प्राचार्य गोविन्द कार्कीसँग विद्यालय तथा शिक्षाक्षेत्रको बारेमा मणिराम दाहालले गरेको कुराकानी :
शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर र सोच कसरी प्राप्त भयो ?
मलाई शिक्षा क्षेत्र प्रतिकोको लगाव सानै उमेर देखि थियो । घरपरिवार आप्mना गुरु, समाज र अभिभावकबाट पनि शिक्षा क्षेत्रमा लागेर काम गर्ने प्रेरणा प्राप्त भयो । २०४३ सालमा स्कुलचौन मा.वि. महारानीझोडा, झापाबाट एस.एल.सी.उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षा पूरा गरेपछि अन्य पेशाभन्दा शिक्षा क्षेत्रमा सेवामूलक काम गरी आप्mनो जीवनलाई अघि बढाउन मन लाग्यो । आफुले उच्च शिक्षा हासिल गरीसकेपछि केही समयसम्म अन्य शैक्षिक संस्थाहरुमा समेत शिक्षण कार्य गरेर समय बिताए ।
पछि २०६५ सालमा यस सुन्दरहरैँचाको विराटचोकमा सुविजीमुर मेमोरियल मा.वि.मा आबद्ध हुँदै स्थानीय क्षेत्रमा गुणस्तरीय, प्रयोगात्मक र समयसापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्ने सोचमा लागि परियो । सोही अनुसार यसैमा तनमन दिएर अघि बढ्दा सफल समेत भएको महसुस गरेको छु । हामीले गरेको परिश्रम र अभिभावकको साथ नै हाम्रो सफलताको कारण हो ।
सुविजीमुर मा.वि.को परिचय कसरी दिन चाहानु हुन्छ ?
अहिले यस विद्यालयमा १ हजार ३ सय ७८ जना विद्याथीहरु अध्ययनरत छन् । यो विद्यालय सुमन विवेक जीवन मुना र रञ्जिताको स्मृतिमा यस विद्यालयको नाम सुविजीमुर रहेको हो । उनीहरु यस विद्यालयका पूर्व छात्र छात्रा थिए । एउटा दुःखद दुर्घटनामा परेर उनीहरुको निधन भएको थियो र विद्यालयले उनीहरुको स्मृतिलाई सधैँ जीवन्त राख्न उचित ठानेर यो नामाकरण गरिएको हो ।
यस क्षेत्रको समाजलाई शिक्षाको माध्यमबाट सभ्य, योग्य, उत्तरदायी र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने हाम्रो चाहाना छ । कसैले पनि शिक्षाको उज्यालो घामबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि यो विद्यालय सञ्चालनमा छ । विद्यार्थीहरुले गरेको उन्नती प्रगतिले गर्दा अझै यो विद्यालयलाई अगाडि बढन सजिलो भएको छ ।
यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेका छन् । डाक्टर, इन्जिनियर तथा बिएसी नर्सिङमा हाम्रो विद्यार्थीहरुले अन्य नाम चलेका शैक्षिक संस्थाहरुमा राम्रो प्रगति गरी अध्ययनरत छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा भन्नु पर्दा एसएलसी परीक्षाको उत्कृष्ट नतिजाले यस सुविजीमुरको उपलव्धीलाई प्रष्ट पारेको छ । स्थानीय ठाउँमा बसेर हामी केही साथीहरुको पहलमा यस विद्यालयको स्थापना भएको हो । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा ठूलो आत्मासन्तुष्टि समेत मिलेको छ । बाँकी दिनहरुमा समाजको हितमा अझै राम्रो काम गरी समय विताउने मन छ ।
विद्यार्थीहरुको सुनौलो भविष्यका लागि असल शिक्षकका गुणहरु के के हुन् ?
सबै विद्यालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिदैँ भयरहित शिक्षा पद्धतिको पालना गरेर अघि बढ्न सके शिक्षामा सुधारको संकेत देखिन्छ । विद्यालयमा शिक्षकको काम कर्तव्य सँगसँगै अभिभावकहरुले पनि आप्mना छोराछोरीहरुलाई घरमा विशेष हेरविचार गरी पठनपाठनको क्षेत्रमा हौसला दिन सके विद्यार्थीहरुको भविष्य सुन्दर हुन सक्छ । विद्यालयले मात्र विद्यार्थीहरुलाई कडाइ गरेर सुधार्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन ।
हामीले त बाटो देखाइदिने हो, त्यो बाटोमा हिड्न विद्यार्थीहरुलाई अभिभावकहरुले पनि सिकाउनु पर्छ । विद्यार्थीहरु देश निर्माणका खम्बाहरु हुन् । कुनै पनि विद्यार्थी राम्रो हुनका लागि निश्चित गुणहरु हुन जरुरी हुन्छ । खाली कागजका पाना जस्ता मस्तिष्क लिएर आएका नानीहरुलाई अक्षर चिनाउने, जिज्ञासु बनाउने, प्रेरणा दिने, ज्ञान र क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै देश प्रति जिम्मेवार बन्न सिकाउने एक कुशल शिक्षकमा हुनु पर्ने गुण र काम कर्तव्य अन्तर्गत पर्दछ ।
तपाईको विचारमा शिक्षक–विद्यार्थी तथा अभिभावक बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु बीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु अति आवश्यक हुन्छ । बालबालिकाको रुची र चाहनालाई बुझेर शिक्षकले अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक छ । कमजोर विद्यार्थी कहिल्यै आफै कमजोर हुँदैन् । त्यसको पछाडि विविध कारणहरु रहेका हुन्छन् । त्यसकुरालाई पहिल्याएर समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ । विद्यार्थीहरुको पढाइमात्र ठूलो कुरा होइन ।
उनीहरुलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत सामेल गराएर विद्यार्थीहरुको सकारात्मक पक्षको कदर गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहन समेत गर्नु पर्छ । विद्यार्थीलाई सँगै बसेर शिक्षक र अभिभावकले पनि पढ्ने लेख्ने बानीको विकास गर्नु आवश्यक छ । छोराछोरी तथा विद्यार्थीलाई मात्र पढपढ भनेर सधै गाली गर्नुहुदैँन । सिपमूलक शिक्षामा जोड दिदैँ प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाको वर्तमान आवश्यकता देशलाई छ । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै विद्यार्थीको रुची चाहाना बुमmेर शिक्षालाई लागु गर्न सके शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्न सक्छ ।
सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचकोे सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्दछ ?
सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सके शिक्षाको हित र विकास हुन समय लाग्दैन । सामुदायिक विद्यालयहरुले सरकारी क्षेत्रबाट पाउने गरेको सेवा सुविधा निजी विद्यालयहरुले समेत पाउन आवश्यक छ । सरकारी स्तरबाट भएका तालिम, गोष्ठि, शिक्षामूलक सभा समारोहमा निजी विद्यालयहरुले समेत सहभागी बन्न पाउनु पर्छ । आखिर सामुदायिक तथा निजी विद्यालय दुवैको काम शिक्षा प्रदान गर्ने भएकाले एकअर्का बीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन जरुरी छ ।
निजी विद्यालयहरुले आवश्यकता भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको भन्ने केही अभिभावकहरुको गुनासो छ नि ?
मन लागि विद्यालय खोलिनु, आफु खुसी शुल्क निर्धारण गरेर आवश्यकता भन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीबाट लिनु राम्रो काम होइन । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले कसैको पनि हित र भलाई गर्दैन् । अहिले अस्वस्थ्य प्रतिपर्धा हरेक क्षेत्रमा छ । यसको साटो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सके सबैको हित र भलाई हुन्छ । अरुले महँगो महसुस गरेको शुल्क विद्यालयलाई सबै कुरा जुटाएर काम गर्न गाह्रो भएको पनि हुन सक्छ । विद्यालय राम्रो सँग सञ्चालन गर्न धेरै आर्थिक लगानी चाहिन्छ ।
तर शिक्षालाई हामीले सामाजिक सेवा सम्झिएर काम गर्नु पर्दछ । सधैभरी नाफामात्र हेरेमा व्यापारिकरण हुन्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन । अहिलेको परिवेशमा समय अनुकुल युग सुहाउँदो शिक्षाको आवश्यकता छ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला व्यक्तिहरुले चेतनाको विस्तार गरेर सकरात्मक कुरालाई आलोचनाको दृष्टिकोणबाट टाढा राख्दै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हामीले असल शिक्षालाई हाम्रो व्यवहार र क्रियाकलापमा प्रयोग गरी जीवन र जगतलाई सुन्दर बनाउन सक्नु पर्छ ।
कतिपय बालबालिकाहरु शिक्षाको उज्यालो घामबाट अहिले पनि वञ्चित छन्, यस बारेमा तपाईँको के धारणा छ ?
शिक्षाको उज्यालो घामबाट बालवालिकाहरु बञ्चित हुनु हुँदैन । यसलाई व्यवहारमा उर्तानका लागि प्रष्ट कानुन बनाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्छ । शिक्षाको जग बलियो भएमात्र देशलाई विकासको गतिदिन सजिलो हुन्छ ।
नीतिगत रुपमा सरकार शिक्षाक्षेत्रमा सचेत भएर अघि बढ्न जरुरी छ । मुलुकमा सरकार छ भन्ने भावनामा जोड दिएर नीतिअनुसारको शिक्षा संचालन हुन सके देशमा बेरोजगारी समस्या हल हुन सक्छ । देशमा रोजगारमूलक, सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षाको आवश्यक छ । वर्तमान समयमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने नभई विज्ञान र प्रविधिको विकासका साथमा अगाडी बढ्ने र २१ औँ शताव्दीको आधुनिक विश्वका लागि समय सुहाउँदो र योग्य हुनुपर्दछ ।
यस विद्यालयको आगामी योजना के कस्ताे रहेकाे छ ?
यस सुविजीमुर मेमोरियल मा.वि.को आगामी योजना भन्नु पर्दा हामी शैक्षिक गुणस्तरमा विश्वास गर्ने भएकाले पहिले सबै भौतिक पूर्वाधार र अन्य आवश्यक कुराहरुको तयारी गरेपछि मात्र केही गर्न खोजी रहेका छौ । यस विद्यालयमा मोरङको कसेनी, बेलबारी, बनिगामा, हरैँचा, मृगौलिया र तेतरियासम्मका विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि आउने भएकाले विद्यालयको भौतिक पक्ष सँगै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्दै लाने हाम्रो चाहाना छ ।
यस विद्यालय मोरङ जिल्लाको निरन्तर उत्कृष्ट हुने ४ विद्यालय भित्र पर्न सफल भई विं.सं. २०६९ र ०७० सालमा राष्ट्रिय सम्मान समेत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । विद्यार्थीहरुले पढाइमा प्रगति गर्न सके भने विद्यालयका शिक्षक र घरमा अभिभावकहरुलाई खुसी लाग्दो रहेछ । मलाई भविष्यमा राम्रो काम गर्दै शिक्षा र समाजसेवामा समय विताउँदै अघि बढ्ने चाहाना छ । यसै कुरालाई साकार पार्न यो जन्मभूमिको आगँनमा कर्मको पाइला चाल्दै छु, शिक्षालाई जीवनको गोरेटो सम्झिएर हिड्दैँ छु ।
सुकुना क्याम्पसकाे प्रमुखमा श्रेष्ठ, भट्टराई सेवा मुक्त